कैलालीमा ग’र्भवती श्रीमतीको को’शेली लिन श्रीमान जान थाले – Life Nepali
कैलालीमा ग’र्भवती श्रीमतीको को’शेली लिन श्रीमान जान थाले
लम्की । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ४०० ग’र्भवतीलाई पो’षण उपहार प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा नियमित ग’र्भजाँ’च गराइरहेका ग’र्भवती’लाई पो’षण-स्वरुप खानेकुरा र नगद प्रदान गरेको हो । उपहारमा एक क्या’रेट अ’ण्डा, आयो’डिन नुन, सरसफाइका सामान र रु एक हजार नगद रहेका छन् । अमरावतिकी जमुना-कुमारी चौधरीले गाउँ-पालिकाले गर्भ’वतीको स्वा’स्थ्यमा ध्यान गर्न सन्देश दिएको बताउनुभयो । “पोषण उपहार संगै ग’र्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र खानपानबारे समेत जानकारी पायौँ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमले घर-परिवारलाई समेत ग’र्भवतीको स्वा’स्थ्यमा सचेत रहन सजग गराउँछ ।” वन्देविपुरकी रीता विष्ट गर्भवती हुनुहुन्छ । उहाँसँगै को’शेली बुझ्न उहाँका श्रीमान् पनि साथमा आउनुभएको थियो । “मेरो श्रीमती ग’र्भवती भएको सात महिना भयो । यहाँ आएपछि मैले धेरै जानकारी पाए ।” रीताका श्री’मान् विष्टले भन्नुभयो, “अब म मेरो श्रीमतीको खा’नपानमा पूरै ध्यान दिन्छु, उनीलाई चाहिने आराम, वातावरणबारे पनि म सचेत हुन आवश्यक रहेछ ।”
गाउँपालिकाले आमा र बच्चाको पोषणमा सुधार ल्याउन र मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग पु¥याउन कोशेली कार्यक्रम शुरुआत गरेको हो । कोशेली वि’तरणका लागि रु सात लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले दुई चरणमा कोशेली दिने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा फागुन दोस्रो चरणमा जेठ म’सान्तमा कोशेली दिइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौ’धरीले जानकारी दिनुभयो । “ग्रामीण महिला गर्भावस्थामा खानपानमा ध्यान दिँदैनन्,यसले बच्चा र आमाको स्वा’स्थ्यमा असर गर्छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ कोशेली दिन थालेका हौँ ।
एक दिन मात्र दिएर पोषण वृद्धि त हुँदैन तर, महिला र तिनका परिवार सचेत हुन सक्छन् ।” जन्मिने नवजात शिशुलाई स्वस्थ बनाउन पोषण उपहार का’र्यक्रम सहयोगी हुने उपाध्यक्ष उमा महत्तोले बताउनु भयो । “हाम्रो समाजमा गरिबी छ । बुहारीले घरका सबैले खाना खा’एपछि खाने चलन छ । अन्त्यमा खाने बुहारीलाई खाना नपुगे उनीहरु भोकै बस्छन् ।’’ उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनि कसरी पोषणमा सुधार आउँछ । धेरै महिलामा र’क्तअ’ल्पताको स’मस्या देखिन्छ, ब’च्चा ज’न्माउँदा र’ग त आ’वश्यक पर्छ । त्य’सकारण यो अभियान थालिएको हो ।”
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्था’मा ग’र्भजाँ’चमा आएकालाई मात्र यो कोशेली दिने गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले नियमित ग’र्भजाँच गर्ने बा’नीको विकास गर्नका लागि पनि कोशेलीले सघाउने विश्वासव्यक्त गर्नुभयो । “गर्भावस्थामा महिलाले पटकपटक खानेकुरा खाने, सरसफा’इमा ध्यान दिने, आराम गर्ने, मानसिक थकान कम गर्नेजस्ता कुरा पनि सिकाउन थालेका छौँ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो अ’वस्थामा गर्भ’वती खुशी हुन नसकेमा त्यसको असर ब’च्चामा पनि पर्छ । त्यस का’रण म’हिला र तिनका परिवारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।” गाउँ टोलमा को’शेली का’र्यक्रमबारे महिला स्वा’स्थ्य स्व’यंसेविकाले जानकारी दिने गरेका छन् ।-रासस
Previous आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ ? नम्बर कसरी थाह पाउने कलफरवार्ड कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस सबै जानकारी
Next चैत ६ देखि सुरु हुने, एसइई परीक्षामा पाँच लाख १० हजार विद्यार्थी